UAE”Maxkamad 11 Ruux Ku Xukuntay Xabsi Daa’in iyo Sababta Lagu Xidhay | Berberatoday.com
UAE”Maxkamad 11 Ruux Ku Xukuntay Xabsi Daa’in iyo Sababta Lagu Xidhay
Dubai(Berberatoday.com)-Maxkamada dalka Isu taga-Imaaraadka-Carabta ayaa Axadii shalay xabsi daa’in ku xukuntay eedaysanayaal loo heystay inay abaabulayeen weeraro argagaxiso oo ay dhaqaale ugu aruurinayeen kooxo argagaxiso ah.
Dadka maxkamada lasoo taagay ayaa gaadhayey 41 qof, kuwaasi oo labo kamid ah la xukumay iyagoo maqan.
Kooxdan ayaa lasoo qabtay bishii Oktoober ee sanadkii hore waxaana lagu eedeeyey in qaarkood lagu helay hub kala duwan, sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in ay dhaqaale u aruurinayeen kooxda Al Nusra ee Al Qacidada ka dagaalanta dalka Siiriya.
23 kamid ah eedaysanayaasha ayaa iyaguna lagu xukumay xabsiyo kala duwan oo gaadhaya illaa 15 sano, halka qaar kamid ah eedaysanayaasha lasii daayey kadib markii wax danbi ah lagu waayey.
Dalalka Khaliijka ayaa muddooyinkii danbe olole ku qaaday shaqsiyaadka wamadooda ku sugan ee xidhiidhka la leh kooxaha hubeysan ee ka dagaalamaya Bariga Dhexe, iyagoo ka cabsi qaba in kooxahaasi mustaqbalka ay khal khal ku keenaan amnigooda gudaha.